Blog - Tech Sound
Business Intelligence (BI) ဟာ လျင်မြန်စွာနဲ့ ပိုမိုလွယ်ကူလာပြီး ကြီးမားတဲ့အချက်လက်တွေကို ဘာသာပြန်တဲ့နေရာမှာ အရေးကြီးလာပါတယ် ။ ကိုယ့်ရဲ့ စီးပွားရေးလုပ်ငန်းတွေကိုလည်း BI ကို အသုံးပြုပြီး လေ့လာနိုင်ပါတယ် ။ အောက်မှာဖော်ပြထားတဲ့ စာအုပ်တွေကတော့ "Business Intelligence"...
How business intelligence works? စီးပွားရေးလုပ်ငန်းတွေနဲ့ အဖွဲ့အစည်းတွေမှာ မေးခွန်းတွေနဲ့ပန်းတိုင်တွေရှိပါတယ် ။ အဲ့ဒီမေးခွန်းတွေရဲ့ အဖြေကိုရရှိဖို့အတွက် လိုအပ်တဲ့ Dataတွေကို စုဆောင်းကာခွဲခြမ်းစိတ်ဖြာရုံသာမက ပန်းတိုင်ကိုရောက်ရှိဖို့အတွက်လည်း လုပ်ဆောင်ရမဲ့ Actionတွေကို...
What is SEO? SEO( Search Engine Optimization)ရဲ့အဓိပ္ပာယ်က userများအနေဖြင့်Google, Yahooကဲ့သို့သော search engineများကိုအသုံးပြု၍လိုအပ်‌သောရှာဖွေမှုများပြုလုပ်သည့်အခါတွင်သင့်ရဲ့ website...
What is it? Business Intelligence ဆိုတာ Traditional ကျကျ Dataများကို အလွယ်တကူ ခွဲခြမ်းစိတ်ဖြာခြင်းဖြစ်ပါတယ် ။ ဒါပေမဲ့ Decisionပြုလုပ်တဲ့အခါမှာ လူသားတွေကိုယ်တိုင် ပြုလုပ်မှာ ဖြစ်ပါတယ် ။ Artificial Intelligence ဆိုတာ Advanced ပုံစံနဲ့ Computersတွေက သူတို့ကိုယ်တိုင်...
Business Intelligence ဆိုတာ ယုံကြည်စိတ်ချရတဲ့ သတင်းအချက်အလက်တွေကို ပိုမိုမြန်ဆန်ပြီး ကောင်းမွန်တဲ့ ဆုံးဖြတ်ချက်ရရှိဖို့ မှန်ကန်တဲ့ အချိန်မှာ မှန်ကန်တဲ့ လူတွေဆီ ပို့ဆောင်ပေးခြင်း ဖြစ်ပါတယ် ။ BI ဟာ သတင်းအချက်အလက်တွေကို စုဆောင်းပြီး ဖွဲ့စည်းတည်ဆောက်ဖို့အတွက် method နဲ့...
When creatingawebsite, it’s vital to remember that not only does it need to work and look great on the device you are creating it on, but on all the other devices, it might be used on too. Mobile and tablet optimization is important not only for the user journey but...
5 ways to improve your UX Design interview skills
I have mentioned before in previous UX design articles that my mentors were instrumental in helping me land my first UX design role. One of the most valuable ways they helped me was through mock interviews and interview coaching. I am still not the best interviewer,...
The modern web design process is where art, technology, and psychology meet and it evolves over time as new trends emerge. It isamix of technical acumen, cognizance of HCD (Human-Centered Design), and an eye for art. If this process is executed well, your visitor’s...
7 Key Elements That Great UX Design Must Have
I have recently reread Steve Krug’s book— Don’t Make Me Think — A Common Sense Approach to Web Usability. Though it was published in the early 2000s, the book still seems so relevant today. In the book, Steve Krug mentioned that many people ask him the most important...
A design system isacollection of rules, constraints, principles and repeatable components that help to createacompany’s process to design and build digital products. It is imperative to protectabrand, elevate its end-user experience, align teams and increase the...